७३७ यात्रुबाहक विमान समुद्धमा खस्यो, सवार सबैको अवस्था अज्ञात ! | suryakhabar.com
Home अन्तर्राष्ट्रिय ७३७ यात्रुबाहक विमान समुद्धमा खस्यो, सवार सबैको अवस्था अज्ञात !
७३७ यात्रुबाहक विमान समुद्धमा खस्यो, सवार सबैको अवस्था अज्ञात !
on: १२ कार्तिक २०७५, सोमबार १३:१० In: अन्तर्राष्ट्रियTags: No Comments
जकार्ता । इन्डोनेसियाको लायन एयरको बोइङ ७३७ यात्रुबाहक बिमान सोमबार बिहान उडेलगत्तै दुर्घटनाग्रस्त भएको छ । उक्त जहाजमा चालक दलका सदस्य सहित एक सय ८८ जना रहेको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
भिडियो फुटेजमा समुद्रको पानीमाथि हवाईजहाजबाट चुहिएको तेल देखिएको छ । उडान नं. जेटी–६१० को उक्त हवाईजहाजमा १७८ जना वयस्क, एकजना शिशु, दुई बालबालिका, दुईजना पाइलट र पाँचजना चालक दलका सहयोगी रहेको इन्डोनेसियाली अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
इन्डोनेसियाको खोज तथा उद्धार एजेन्सीका प्रवक्ता युसुफ लतिफले दुर्घटनाग्रस्त बिमानमा सवार यात्रु एवं बिमानको अवशेषको खोजी भइरहेको बताए । उनले राडारसँगको सम्पर्क टुट्नुअघि बिमानले जकार्ता नै फर्कनका लागि अनुरोध गरेको समेत जानकारी दिए । तर जहाज फर्कन नपाउँदै जाभा समुद्रमा खसेको बताइएको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारी चार दिने औपचारिक भ्रमणका लागि कतार प्रस्थान
१२ कार्तिक २०७५, सोमबार १३:१०